Izibane zemiSebenzi yomsebenzi, iLamp Work Lamp, iCamp Work Work Lamp Manufacturers and Suppliers in China
Inkcazo:Iintambo zomsebenzi zintsimbi,Led Work Lamp,Lampu lo msebenzi,KuKhanya ku sebenza,,
Home > Imveliso > Izibane zoMsebenzi > Iintambo zomsebenzi zintsimbi
Iintlobo zeMveliso ze- Iintambo zomsebenzi zintsimbi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iintambo zomsebenzi zintsimbi , Led Work Lamp ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-100W yeeMveliso zemiSebenzi yeeNkcazo zoLondolozo lweeNkcazo  Qhagamshelana Ngoku
I-80W yokwakhiwa kwezibane zesikhashana zemiSebenzi yesikhashana  Qhagamshelana Ngoku
Ixabiso lento: USD 52 - 56 / Piece/Pieces
IziLimi zoKwakha zoMsebenzi oManzi ziMzimba zinobunzima obukhulu kunye nentambo ye-10ft evumela ukuba kube lula ukuma nokulula. Kwaye akukho mfuneko yokuba i-ballast, ngoko-ke umqhubi akadingeki ukuba adibanise indlu ye-ballast yokuhlala. Ii-80w...
KwiChina Iintambo zomsebenzi zintsimbi Abaxhasi
Izibane zeBbier Work Stings zenziwe nge-cable kunye nefowuni ebunjiweyo kunye nomxhasi ophela. Isitampu seSebenzi seString siyatholakala kwi-80 watt, i-100 watt, i-120 watt kunye ne-150 watt, i-stringer nganye ihamba ngamacenge eplastiki okanye isinyithi. Ukwakhiwa komsebenzi onzima kunomlinganiselo wokusetyenziswa kwangaphandle kwaye i-RO ROH ibhalwe.
UkuKhanya koMsebenzi kulungele ukukhanyisa ii-workshops, iigaraji kunye neendawo zokusebenza zokusebenza. I-Led Work Lamp yenzelwe ukumelana ne-abrasions, umswakama kunye nelanga. Iqonga layo lokukhusela likhusela i-bulb elula kwaye yenza kube lula kwaye kulula ukuyifaka indawo xa kuyimfuneko. Izibane zemiSebenzi yokuSebenza zingafakwa kunye nekhonkco ukuba zibekwe phezu komsebenzi wendawo. Ukukhanya kwe-LED ye-LED i-ETL iboniswe ukuba iphakame kufuphi neendawo ezinomdaka eyenza isisombululo esikhulu se-LED kwimisebenzi yokukhanya, ukukhanyisa igalaji, izakhiwo zokwakha kunye nezicelo ezininzi zokuthengisa nezokuhlala.
Iintambo zomsebenzi zintsimbi Led Work Lamp Lampu lo msebenzi KuKhanya ku sebenza Izibane zemiSebenzi eziLungisiweyo